အရင်က ဘာတွေပဲလုပ်ခဲ့ လုပ်ခဲ့ အသက်သုံးဆယ် အရွယ်မှာ စတင်ရမယ့် အရာများ – Nyi Ma Lay
အရင်က ဘာတွေပဲလုပ်ခဲ့ လုပ်ခဲ့ အသက်သုံးဆယ် အရွယ်မှာ စတင်ရမယ့် အရာများ
By Nyi Ma LayPosted on August 22, 2021
အသက် ၃၀+ ဆိုတာ ဘဝရဲ့ ငါး ပုံနှစ်ပုံခန့်ကို ဖြတ်သန်း ပြီးစအရွယ်ြ ဖစ်ပါတယ် နုပျိုမှုနဲ့ ဘဝအတွေ့အြ ကုံ ဉာဏ်ပညာရ င့်ကျက်မှု သမမျှတ တဲ့အရွယ်ပါ။ ဒီအရွယ် မှာလိုက်နာ သင့်တဲ့ အချက် ၁၉ ချ က်ကို Brightside ဆို တဲ့ website က ဆောင်းပါးတ စ်ခုကနေ ကျနော် နားလ ည်သလော က်ဆီေ လျာ်အောင်ဘာသာပြန် ထားပါတယ်။ ၃၀ ပြည့်စ၊ ကျော်စ သူငယ်ချင်းေ တွဖတ်ဖို့ပါ
ဆေးလိပ်သောက် တတ်သူဆို ရင်လည်း ချက်ချင်းဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ပိုက်ဆံကုန်တယ်၊ အနံ့ဆိုးတယ်၊ ရောဂါရဖို့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ေ သချာတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တာကို ခုပဲရပ်လိုက်သင့်ပါပြီ။
သင့်ရဲ့အသား အရေမှာ နေလော င်ဒဏ်တွေ၊ မှဲ့ခြောက်တွေ အဖုအပိန့်တွေမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ UV ခရင်မ်တစ်ခုခုကိုစလိမ်းဖို့လိုပါပြီ။
၃။ ပိုက်ဆံ စစုပါ။ နည်းတာများတာ ပဓာနမဟုတ်ပါ။
ပျင်းစရာကော င်းတဲ့အကြံပြု ချက်ကြီးလို့ထင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် အသက်သုံး ဆယ်နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်ရှိတဲ့ဝ င်ငွေထဲက နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် စုဆောင်းထားတ တ်တဲ့အကျင့်လုပ်ထားခြင်းဟာ အနာဂတ်အတွက် အာမခံချက်တစ်ခု ကိုတည်ဆော က်နေခြင်းပါပဲ။
၄။ မိဘတွေ၊ မောင်နှမတွေနဲ့ဆက်ဆံေ ရးကောင်းကို တည်ဆောက်ပါ၊ မကောင်းရင်ပြင်ဆင်ပါ။
သင့်မိဘတွေ၊ မွေးချင်းေ တွနဲ့ သင့်ရဲ့ဆက် ဆံရေးဟာ ရှုပ်ထွေးတယ်၊ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တောင် သူတို့တွေနဲ့လို က်လျောညီေ တွဖြစ်အောင်ြ ကိုးစားဖို့လိုအပ်ပါ တယ်။ မိသားစုသံယော ဇဉ်ဆိုတာ ဘဝမှာအင် မတန်ကိုအေ ရးပါပါတယ်။ မိသားစုဆိုတာ သင့်ဘဝမှာ တန်ဖိုးအကြီးဆုံးအရာဆိုတာ အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလို သင်သိလာ ပါလိမ့်မယ်။
၅။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအစား အမှတ်တရတွေကိုစုဆောင်းသိမ်းဆည်းပါ။
ဘဝတစ်ခု ဆိုတာ အတွေ့အကြုံတွေ အမှတ် တရတွေနဲ့တည်ဆော က်ထားတာ ပါ။ အသက် ငါးဆယ်ေ လာက်ကျမှ “ငါ့ဘဝမှာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းေ တွပဲ စုဆောင်းမိခဲ့ပြီး အမှတ်တရဆို လို့ဘာမှမရှိ၊ ဗလာနတ္ထိဘ ဝကြီးပါလား” ဆိုပြီးနော င်တမရချင်ပါနဲ့။ အမှတ်တရဖြ စ်ရပ်တွေဆိုတာ ဟောင်းသွားလို့ တန်ဖိုး ကျတယ်တို့၊ မီးလောင်လို့ ပျက်စီးသွားတယ်တို့ လုံးဝမရှိပါဘူး။
၆။ လောကကြီးကို တစ်ခုခုပြန်ပေးဖို့ကြိုးစားပါ။
သူတပါးအ ကျိုးကိုဆောင်ရွ က်လိုက် ရခြင်းကြောင့် မိမိကိုယ်မိမိ လူကောင်း တစ်ယောက်အဖြစ် ထင်မြင်လေးစားမှု ရရှိစေပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတပါးအတွ က်ပေးကမ်းေ ဆာင်ရွက်တဲ့အခါ ဘာအကျိုးအြ မတ်ကိုမှမေ မျှာ်ကိုးဖို့နဲ့ တကယ့်ရ င်ထဲနှလုံးထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲေ ဆာင်ရွက်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
သွက်လက်တဲ့ ဘဝပုံစံမျိုးကို အခုပဲစတင် တည်ေ ဆာက်လိုက်ပါ။ ကိုယ်လက်လှု ပ်ရှားမှု ပုံမှန်လုပ်ပေးြ ခင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကို သင့်အသက် ငါးဆယ်ဝန်းကျင်ကျရင် သိသိသာသာခံ စားရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်အေ လးချိန်ကို ထိန်းပါ၊ လေ့ကျင့်ခ န်းပုံမှန်လုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ရမယ့်အရွယ်ေ ရာက်လာပါပြီ။
၈။ ဘဝမှာရောင့်ရဲတတ်ဖို့ လေ့ကျင့်သင်ယူပါ။
တစ်ကိုယ်ရေေ ပျာ်ရွှင်မှုဆိုတာ လူသိများပြီး ကမ္ဘာကျော်တဲ့ေ အာင်မြင်မှုတွေ ထက်ပိုအေ ရးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိသမျှလေးနဲ့ရောင့်ရဲတတ် တဲ့အတွက်ကြော င့် မီလီလျံနာ ကြီးမဖြစ်ပေမယ့် ပျော်ရွှင် တဲ့လူသားတစ်ဦးေ တာ့ဖြစ်စေမှာေ သချာပါတယ်။ မီလီလျံနာသူေ ဌးကြီးြ ဖစ်လာရ င်လည်း အောက်ခြေ မလွတ်တဲ့၊ ဘဝကိုပျော်ရွှ င်ကျေနပ်မှုရတဲ့ သူဌေးကြီးဖြ စ်လာပါလိမ့်မယ်။
၉။ ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အချိန်မစောင့်ပါနဲ့တော့။
အိမ်တစ်လုံးေ လာက်ဝ ယ်ချင်နေလား ?
အိမ်ထောင်ပြုပြီး သားသမီးတွေ ယူဖို့စိတ် ကူးနေလား? စာအုပ်တစ် အုပ်လောက်ရေးချ င်နေလား ?
မဟာဘွဲ့တစ်ခုခု ယူဖို့စိတ်ကူးေ နလား? အသက်မွေး ဝမ်းကျော င်းလုပ်ငန်းအသ စ်တစ်ခုစချင်ပြီလား ?
တူရိယာတစ်ခုခု တီးမှုတ်တတ်ဖို့ လေ့လာချင်နေလား? ကိုယ်ပိုင်လုပ်င န်းတစ်ခုထောင်ချ င်နေလား? ဒီနေ့ပဲ သင့်အိမ်မ က်ကိုအကော င်အထည် စဖော်ပါတော့။
“တစ်နေ့နေ့တော့ စကိုစမယ်ကွ” ဆိုပြီး နေ့ရွှေ့ညေ ရွှ့လုပ်ရတာလွ ယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အသ က်သုံးဆယ်နော က်ပိုင်းရောက်လာရင် အချိန်ကအရင်ကထက်အကုန်မြန်တော့မှာ။ ဟိုလှည့်သည်လှည့်နဲ့ လေးဆယ် ငါးဆယ် ရောက်သွားမှာ။ သင့်အိမ်မက်တွေကို မဖြစ်မနေစတင်ရမယ့်အချိန်ဟာ သည်နေ့ သည်ချိန်ပါပဲ။
အလင်းရောင် စူးစူးတွေမရှိတဲ့၊ မှောင်ပြီးတိ တ်ဆိတ်တဲ့ အခန်းမှာ အေးအေးချမ်း ချမ်းအိပ်စက်ပါ။ အိပ်ယာထဲမှာ ဖုန်းမပွတ်ပါနဲ့။ အိပ်ပျော်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ အိပ်ချိန်နဲ့ ထချိန်ကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် လုပ်ထားပြီး အချိန် မှန်အိပ်၊ အချိန်မှန်ထဖို့ လေ့ကျင့်ပါ။
သွားေ ဆးခန်းမှာ သင့်သွားနဲ့ခံတွင်း ကိုအခုပဲစစ်ဆေးပါ။ ပျက်စီးနေတာေ တွရှိရင်အခုကတ ည်းကပြင်ဆင်ဖာေ ထးလိုက်ပါ။ သွားကျ န်းမာရေးဆိုတာ ဂရုမစိုက်ပဲထားရင် သူ့ဟာသူပြ န်ကောင်းသွား တယ်လို့ ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူး။
ပိုဆိုးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်။ သွားနဲ့ပတ်သ က်တဲ့ကုသမှုတွေက ဈေးကြီး တာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကုမဖြစ်အခြေအေ နကျမှ ဆေးခန်းသွားရင် အဆပေါင်းများစွာပိုကုန် သလို ပိုလည်း နာပါလိမ့်မယ်။
၁၂။ စူးစမ်းလေ့လာပါ၊ ခရီးထွက်ပါ။
အိမ်ထဲကနေ ထွက်ပြီး ခရီးတွေသွား ဖို့ ခုပဲပြင်ဆ င်ပါတော့။ သင်သွားနိုင်သမျှ ဝေးဝေးနဲ့ သင်တတ်နိုင်သမျှ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ နေရာတွေဆီကို ခရီးထွက်ပါ။ ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ပါ။ စွန့်စွန့်စားစားသွားရမယ့်နေရာတွေအထိသွားပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ သင်နဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူတ စ်ယောက်ကိုခရီးဖော် အဖြစ် ခေါ်သွားပါ။ ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့အမှတ်တရတွေ ဖန်တီးလိုက်ပါ။ သင်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ဒီခရီးတွေအကြော င်းပြန်တွေးပြီး ပြုံးနေပါလိမ့်မယ်။
သင့်မှာပိုက် ဆံတွေရှိလွန်းလို့ တစ်ကမ္ဘာံ လုံးကိုဝယ်ရင်ဝ ယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာေ ရးဆိုတာ ဝယ်ယူလို့မရပါဘူး။ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ အစားအေ သာက်တွေကို အသက်သုံးဆယ်ကေ နစပြီး ရှောင်ရှားပါ။
၁၄။ တစ်နှစ်ကို အနည်းဆုံး စာအုပ် ဆယ်အုပ်တော့ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ။
လူတစ်ကိုယ်လုံးမှာ သေတဲ့အထိဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားနိုင်တဲ့အ ရာဟာ သင့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာ သာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ြ ကီးထွားဖွံ့ဖြိုးအောင် စာကောင်းပေမွန်တွေနဲ့လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးပါ။
၁၅။ စိတ်လေ့ ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုကိုသင်ယူေ လ့ကျင့်ပါ။
စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေး ဇူးတွေဟာ အနန္တပါ။ ပြောလို့မကုန်ပါဘူး။ သင့်ဘ က်ကရင်းနှီးရမှာဆိုလို့ တစ်နေ့တာရဲ့ အချိန်နည်းနည်းလေးရယ်ပါ။ စိတ်တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူေ တွကတောင် သင့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကို သတိထားမိလာကြပါလိမ့်မယ်။
၁၆။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သူများတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့တော့။
သူများတွေကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးမကြီးဆိုတာ အရေးမပါမှန်း သင့်အသက် ၅၀ လောက်ကျရင် သင်သိလာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ခိုင်ခိုင်မာမာ လျှောက်ပါ။
ဘဝထဲကအမှ တ်တရဖြစ်ရ ပ်အချို့ဟာ သင်သတိ တရနဲ့ ရေးမှတ် ထားတာမျိုးမလုပ်ရင် တစ်ချိန်ကျ မေ့သွား တတ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ဘဝအမှတ်တရလေးေ တွစုစည်းေ ရးမှတ်ထားတဲ့ ဒိုင်ယာရီလေးကိုပြန်ဖတ်ရတာ ဖျော်ဖြေမှုတစ်မျိုးပဲပေါ့။
Memory stick လေးနဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလေးေ တွအားလုံးကို သိမ်းဆည်းထားပါ။ သင့်ရဲ့အမှတ်တ ရသိမ်းဆည်းတတ်တဲ့အ ကျင့်လေးကို သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက် နဲ့ သားသမီးမြေးမြ စ်တွေက ကျေးဇူးတင်ကြပါလိမ့်မယ်။
၁၈။ သူငယ်ချင်းတွေအပေါ် ဂရုတစိုက်ရှိပါ။
ကိုယ်နဲ့အသင့်ေ တာ်ဆုံး၊ ရင်ဘတ်ချင်းအနီးဆုံး သူငယ်ချင်းကိုရွေးချ ယ်ပေါင်းသင်းပါ။ သူတို့နဲ့အတူ ဘဝကို နိမ့်မြင့်မဟူ အတူတူဖြတ်သန်းပါ။ သူငယ်ချင်းကော င်းတွေနဲ့အဆက်အသွ ယ်မပြတ်ပါေ စနဲ့။ အနည်းဆုံးတ စ်ပတ်တစ်ခါတော့ အဆက်အသွယ်လုပ်၊ စကားစမြည်ပြောပါ။
လူတော်ေ တာ်များများ အတွက်တော့ ဒီအရာဟာ လက်ရှိအခြေအနေအ ရမလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့တာရဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိမ်လေးထဲမှာ အနားယူဖြေဖျော က်နိုင်ဖို့ ရည်မှန်းချက် ထားပြီး တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပါ။
အိမ်တစ်လုံးကို အသက် ၃၀ မှာအရစ်ကျနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင် သင့်အသက် ၅၀ ဆို သင်ဟာ အိမ်ပိုင်ယာပိုင်နဲ့ဖြစ်နေဖို့သေချာသလောက်ရှိပါတယ်။
Previous post ဝမ်းချုပ်နေတာ ကြာလို့ အစိုးရိမ်လွန်ပီး ဆရာဝန် သွားပြကာမှ ငါးရှဉ့်အကောင်လိုက် ဖင်ထဲထည့်ပြီး ကုသမှု့ခံယူလိုက်ရတဲ့လူနာ
Next post ဖုန်းတွေကားတွေမှာ အား လုံးဝပြန်သွင်းစရာ မလိုတဲ့ ဘက်ထရီများ မြင်တွေ့ လာရဖွယ်ရှိနေ